နိုင်​ဝင်းသီ – ကြွက်​တစ်​​ကောင်​နှင့်​ စကားစမြည်​ | MoeMaKa Burmese News & Media
USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄
မေခ – မြူခိုးဝေေ၀
မိုးမခမှာ ဖုန်းခေါ်ပါ …
မိုးမခမီဒီယာ ဆိုတာ …
မိုးမခ အီးဘုတ် Library
မိုးမခ ရာပြည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
Open Library Project
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် Library Catalog
မြန်မာဥပဒေ သတင်းအချက်အလက် Database
မိုးမခ AAPPB – နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၉၈၈-၂၀၁၃
မိုးမခ – ၈၈ အရေးအခင်း Dead & Wounded
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရရွှေမန်းကို လေ့လာခြင်း (၃)
သာထက်အောင် - လူရောင်စုံ၊ ဘ၀ရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ - ၂
ရဲဘော်ငွေ ● မမစိန်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
မောင်သာနိုး - သတိပြုသင့်သည့် မြန်မာစာလုံးပေါင်းများ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဒီမိုကရေစီ၏ ကံကြမ္မာ
ထူးထူး (တောင်ငူ) - အို ဆရာမရယ်
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရရွှေမန်းကို လေ့လာခြင်း (၂)
တင်ဇော်လွင် - ဗိုလ်ချုပ် ရာပြည့် နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းများ
သာထက်အောင် - လူရောင်စုံ၊ ဘ၀ရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ
သန်းဝင်းလှိုင် - သူရရွှေမန်းကို လေ့လာခြင်း (၁)
“နောက်ပြန်မလှည့်ဘူး ရှေ့ ဆက်တိုးမှာ” - Moving Forward
နိုင်​ဝင်းသီ ● ဂျူရီလူကြီးတယောက်နှင့် စကားစမြည်
မောင်ဥက္ကလာ - ကောင်မလေးကို မထိနဲ့
မောင်လူရေး - နိုင်ငံရေးလေလည်ခြင်း (ပြဇာတ်)
ဂျော်ဒီး - မိုးမခဂေဇက်
Gyaw Dee - ၂၀၁၂ မိုးမခသင်္ကြန်သံချပ်
ကယ်တင်ရှင်များအတွက် လက်ဆောင် (Thurain Htet)
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား လွတ်မြောက်ရာသို့ ရောက်သွားပြီ - Mr. Goat on the line of duty
ဖိုးထက် - ငါ မကြောက်… တကြောက်
မောင်ဥက္ကလာ - ပြည်သူများထံပေးစာ - နှုတ်ဆက်စကား (သရော်စာ)
ဂျော်ဒီး - ၂၀၁၄ သင်္ကြန် သံချပ် (မိုးမခ မဏ္ဍပ်) (၁) ဂျော်ဒီး
ဂျော်ဒီး - မိုးမခ မဏ္ဍပ်အတွက် သံချပ် (၂)
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။
Join 89,191 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month February 2019 (76) January 2019 (138) December 2018 (147) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
နိုင်​ဝင်းသီ – ကြွက်​တစ်​​ကောင်​နှင့်​ စကားစမြည်​
နိုင်ဝင်းသီ – ကြွက်တစ်ကောင်နှင့် စကားစမြည်
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် လမ်းလျှောက်ရင်း ရုတ်တရက်မိုးရွာလာသောကြောင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်သို့ ပြေးဝင်ရလေ၏။ လက်ဖက်ရည်တခွက်ကိုမှာသောက်ပြီး မိုးခိုရလေ၏။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာတော့ လက်ဘက်ရည်သောက်နေသူ သုံးလေးယောက်မျှသာ ရှိနေလေ၏။
သည်အချိန်မှာပင် မတိုးလွန်းမကျယ်လွန်းသော အသံလေးတသံကို ကြားလိုက်ရလေ၏။
အသံကတော့ ကျွန်ုပ်နှင့် အတော်နီးကပ်သောနေရာမှ ထွက်ပေါ်လာသောအသံဖြစ်လေရာ ကျွန်ုပ်မှာ မျက်မှောင်ကုပ်မိလေ၏။
” သူငယ်ချင်း ဘဏ်ဘယ်အချိန်ဖွင့်မှာလဲလို့”
သည်တကြိမ်မှာတော့ အသံကိုသာမက ခြေထောက်ကိုပါ တစုံတခုခုနှင့် ပွတ်တိုက်နေသလို မျိုးဖြစ်နေသောကြောင့် စားပွဲအောက်ခြေကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ရာ အမွှေးအမှင်မည်းမည်းနှင့် မြေကြွက်တကောင်ဖြစ်နေလေ၏။ ဘဏ်ဘယ်အချိန်ဖွင့်မှာလဲမေးနေတာကို လူလို့အောက်မေ့နေတာ မြေ ကြွက်တကောင် ဖြစ်နေလေ၏။
စောစောစီးစီး စိတ်ထဲမှာ ထောင်းခနဲ ဒေါသထွက်သွားရလေ၏။
” ဘဏ်ဘယ်အချိန်ဖွင့်ဖွင့်ပေါ့ကွာ၊ သူ့ဟာသူ ဖွင့်ချင်တဲ့အချိန် ဖွင့်မှာပေါ့။ မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ”
“ဆိုင်တာပေါ့ဗျ။ ကျွန်တော်က ဒီဘဏ်မှာ အကောင့်ဖွင့်ထားတာဗျ”
ထိုကြွက်၏စကားကိုကြားလိုက်ရသောအခါ ကျွန်ုပ်မှာ ခေါင်းမွေးများပင် ထောင်သွား ရပါလေ၏။
“ဘဏ်ဖွင့်ရင် မန်နေဂျာနဲ့ စကားပြောရမယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အကောင့်ထဲက ငွေတွေကို ကျွန်တော့်မိန်းမ လာထုတ်ရင် မပေးဖို့ သေချာသတိပေးထားရမယ်”
“နေစမ်းပါဦးကွ၊ မောင်ရင့်မိန်းမက ကြွက်ပဲလား။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာ မောင်ရင်တို့လို ကြွက်တွေကိုလည်း အကောင့်ပေးဖွင့်ထားတာပဲလား”
“ဟာ…တောက်တီးတောက်တဲ့ဗျာ။ ဘဏ်တွေက ကြွက်တွေကို အကောင့်ပေးဖွင့်ပါ့မလားဗျ။ ”
“မင်းပဲ ပြောလိုက်တာပဲလေ။ ဒီဘဏ်မှာ အကောင့်ဖွင့်ထားတာဆိုပြီး”
“ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်ကကျွန်တော်လူ့ဘဝ တုန်းက ဖွင့်ထားတာဗျ။ ဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီး ရှော သွားလို့ ကျွန်တော်ကကြွက်ဖြစ်သွားတာ။ ဘာပဲပြောပြောဗျာ ကျွန်တော့်အကောင့်ကို ကျွန်တော်မှတ်မိ တယ်။ ကျွန်တော်သေလို့ တစ်လတောင် မပြည့်သေးဘူး။ နောက်ယောက်ျားယူသွားတဲ့မိန်းမကိုတော့ တစ်ပြားမှ မပေးနိုင်ဘူးဗျာ”
“နေပါဦးသူငယ်ချင်းရ။ မင်းအကောင့်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ထည့်ထားလို့လဲ”
“သိန်းသုံးထောင်ကျော်ဆိုတော့ ဘယ်နည်းလိမ့်မလဲသူငယ်ချင်းရာ။ ဒါနဲ့နေပါဦးကွ။
လူ့ဘဝတုန်းက မောင်ရင်ဘာများလုပ်ခဲ့လဲ။ သိစမ်းပါရစေကွာ”
“ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဗျာ။ ဘာဌာနလဲလို့ မမေးပါနဲ့။ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် လာရင် ဂိသွားမှာ စိုးလို့ပါ”
” ကြွက်ဖြစ်နေပြီပဲကွာ။ ဘာများစိုးရိမ်စရာရှိတော့လို့လဲ”
“ပြောလို့ရမလားဗျ။ ခင်ဗျားတို့ဥပဒေတွေက အခု ရလွတ်ပလွတ် ဥပဒေဖြစ်နေပေ မယ့် နောက်နောင် အပီ အပြင်သမမယ့် ဥပဒေတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် ကြွက်ဘဝနဲ့တောင် အင်းစိန်တို့ ဘာတို့ ရောက်ချင် ရောက်သွားနိုင်တာဗျ”
“ပူမနေပါနဲ့ကွာ။ အဲဒီလိုဝင်သွားရင်လည်း မင်းတကောင်တည်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မင်းနဲ့ အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အများကြီးပါလာမှာပါ မောင်မောင်ကြွက်ရာ”
“သေချာတာပေါ့ဗျာ။ ဝိဓူရ မြင်းမြီးဆွဲသလို တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ အတွဲလိုက်ကြီးပေါ့ဗျာ။ ပဒေသာကပွဲသဘောမျိုး မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဆိုတော့ ပျော်စရာတောင် ကောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အာစရိရယ် ပျော်တာကနောက်ဗျ။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော့်မှာ စောစောက ပြောသလို သောကတွေများနေ တယ်ဗျာ”
“သေချာတာပေါ့ဗျာ။ ဘဏ်အကောင့်ကိစ္စကို ရတက်မအေးဖြစ်နေရတာပေါ့။ ညဘက် တွေဆို အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး။ ဟိုတညတုန်းကတော့ သွားစဉ်းစားမိတယ်အာစိရ။ ရှေ့နေ တယောက်ငှားပြီး နို့တစ်ပေးခိုင်းရင် ကောင်းမလားလို့”
“ဟာ တောက်တီးတောက်တဲ့ကွာ။ ရှေ့နေက မင်းလိုကြွက်တကောင် နို့တစ်ပေးခိုင်းတာကို လုပ်ပါ့မလားကွ”
“ပြောလို့ရမလားဗျ။ မြိုးမြိုးမြက်မြက်ကလေးပေးရင် လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့”
“ငါကတော့ မထင်ပါဘူး မောင်မောင်ကြွက်ရာ”
“ဒါဖြင့်ရင်လည်း ဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ဝင်တွေ့ပြီး အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြမယ်ဗျာ။
ရှင်းပြတာကိုမှ လက်မခံဘူးဆိုရင် တကိုယ်တော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မယ်”
“ခြေလှမ်းတွေကလည်း ကြဲလှချည်လားကွ ငါ့ကောင်ရ။ မင်းလိုကြွက်က ဆန္ဒဖော်ထုတ်မယ် ဆိုတော့ လူရယ်စရာ ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွ။နည်းနည်းပါးပါးများ စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကွာ”
“ဒါဖြင့်ရင်လည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဗျာ။ အဲဒါက ပိုတောင်ကောင်းလိမ့်ဦးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုတာ တနေ့ကို အနည်းဆုံး လေးငါးခြောက်ခု လုပ်နေကြတာ မို့လား”
“လုပ်လည်းလုပ်လုပ်ပါပဲ ငါ့ကောင်ရာ။ ဘာများထူးလာတာရှိလို့လဲ။ မောင်ရင်လုပ်လည်း အတူတူပဲပေါ့။ ဘာထူးလာမှာမို့လို့လဲ”
“ထူးလာတာ မလာတာက တပိုင်းပါဗျာ။ လောလောဆည်တော့ ကြွက်အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှူံးနေရတာကို လူတွေသိသွားလိမ့်မယ်ဗျာ။ ဒါသိပ်အရေးကြီးတာပေါ့ အာစိရ”
“ဒါကတော့မောင်ရင့်သဘောပဲလေ။ ဘာမှထူးမလာဘူးဆိုတာ ကိုယ်က ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ အရ ပြောနေတာဟ”
“အာစိနဲ့ စကားပြောရတာကောင်းပေမယ့် ဘဏ်ရှေ့မှာ ရုံးစုရုံးစုနဲ့ လူတွေတိုးဝေ့ကုန်ပြီဗျ။ ဘဏ်ဖွင့်တော့မှာနဲ့တူတယ်။ သွားပြီဗျာအာစိ။ နောက်မှတွေ့တော့မယ်”
အလွန်မှပင်လျင်မြန်ဖျတ်လတ်လှသောကြွက်ပင် ဖြစ်လေ၏။ စားပွဲအောက်မှ လှစ်ခနဲထွက်လာပြီး ဘဏ်ရှေ့သို့ ပြေးထွက်သွားပုံမှာ စက္ကန့်ပိုင်းမျှသာ ကြာမြင့်ပါလေ၏။
နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနှင့် ထိုကြွက်သည် ဘဏ်အဝင်အဝမှာလူတွေနင်းမိလို့ပဲ ပြားချပ် သွားခဲ့ပြီလား။
ဒါမှမဟုတ် ဘဏ်မန်နေဂျာနှင့်တွေ့လို့ပဲ အဆင်ပြေသွားခဲ့လေသလား။
အဆင်မပြေလို့ တကိုယ်တော် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲပဲ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့လေသလား။
ဒါမှမဟုတ်စာနယ်ဇင်းတွေကို ဖိတ်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လေသလား ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်ုပ်လည်း ယခုချိန်ထိသေချာစွာ မသိရသေးပါကြောင်း။
နိုင် ဝင်း သီ
၂၄ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၆
၁၄း၁၈ နာရီ
သင့်အကြောင်း သင့်လုပ်ငန်း ကြော်ငြာ သည်နေရာမှာ ကြော်ငြာနိုင်ပါပြီ
နိုင်ဝင်းသီ – မြေခွေး (0)
နိုင်ဝင်းသီ – လွင့်​​မျောတ​စ္ဆေ (0)
နိုင်ဝင်းသီ – ကုလားထိုင်တလုံးနှင့် စကားစမြည် (0)
နိုင်ဝင်းသီ – ရုံးခန်းတခန်းနှင့် စကားစမြည် (0)
နိုင်ဝင်းသီ – မြူ​​များရဲ့​ခြေသံ (0)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သရော်စာ
ကြော်ငြာ … ကြော်ငြာ …
Tharaphu သရဖူ မြန်မာထမင်းဆိုင် - Burmese Street Food -
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ဆောင်းပါးများ ထွက်ပြီ
Hornbill Burmese Cuisine - အောက်ချင်းငှက် မြန်မာထမင်းဆိုင်
မိုးမခ Kindel Store
MoeMaKa Online Store
Colorful People Memorial Place
Copyright © 2019 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
Powered by WordPress and Kamayut Tech.
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ဆောင်းပါးများ ထွက်ပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊...
ဂျူနီယာဝင်း ဘာသာပြန်တဲ့ ၂၁ရာစု ဂျာနယ်လစ်ဇင် ထွက်ပြီ
ဂျူနီယာဝင်း ဘာသာပြန်တဲ့ ၂၁ရာစု ဂျာနယ်လစ်ဇင် ထွက်ပြီ (မိုးမခစာအုပ်စင်) ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...
အေးဝင်း(လမင်းတရာ) ၆၆ မွေးနေ့ အတွက် ကလောင်စုံရေးတဲ့ စာအုပ်
အေးဝင်း(လမင်းတရာ) ၆၆ မွေးနေ့ အတွက် ကလောင်စုံရေးတဲ့ စာအုပ် (မိုးမခစာအုပ်စင်) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...
ဇင်လင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စစ်ခင်းသူ နဲ့ အခြားဆောင်းပါးများ ထွက်ပါပြီ
ဇင်လင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စစ်ခင်းသူ နဲ့ အခြားဆောင်းပါးများ ထွက်ပါပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈၊...
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ
Donate while shopping on amazon
Samuel on ခွန်ဆိုင်း ● ဦးထုတ်ပြာတွေ … လာတယ်… ကြာမယ်
Dr. Maung Maung Gyi on သန်းဝင်းလှိုင် – ဆာဂျွန်ဆိုင်မွန်
Dr. Maung Maung Gyi on မောင်စွမ်းရည် – အမှတ်အနည်းဆုံးကျောင်းသား မြန်မာစာကိုသွား
ပန်းရဲ့လမ်းပဲ့ကိုင်တဦးဖြစ်သူ တေးရေး၊ တေးဆို သားထွေး ဈာပနအခမ်းအနား ယနေ့ ၃နာရီ ရေဝေးမှာ ပြ on ပန်းရဲ့လမ်းပဲ့ကိုင်တဦးဖြစ်သူ တေးရေး၊ တေးဆို သားထွေး ဈာပနအခမ်းအနား ယနေ့ ၃နာရီ ရေဝေးမှာ ပြုလုပ်မယ်
မောင်စွမ်းရည် – သဒ္ဒါထဲက ကကြီး – The Padaythar on မောင်စွမ်းရည် – သဒ္ဒါထဲက ကကြီး
Maung Swan Yi Myanmar Now ကချင် ကမ်လူဝေး ကရင် ကာတွန်း - KZZH ကာတွန်း Joker ကာတွန်း OKKW ကာတွန်း ကိုခေတ် ကာတွန်း ညီပုချေ ကာတွန်း ညီထွေး ကာတွန်း မင်းထက်လူ ကာတွန်း မိုးသွင် ကာတွန်း ဆွေသား ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ကိုသစ် (သီတဂူ) ခက်ဦး ချင်း ဆန်ဖရန် ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ဒီလူည ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂါလီ မင်းကိုနိုင် မာမာအေး မိုးသွင် မွန် ရခိုင် ရခိုင် ရခုိုင် ရိုဟင်ဂျာ ရှမ်း လင်းသက်ငြိမ် သွန်းခ အင်တာဗျူး အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) ဦးကိုနီ မောင်လူပေ မောင်ဥက္ကလာ မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) အောင်သူငြိမ်း ပြည်တွင်းစစ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now)